ရေ — Steemit
မြေကြီးပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်သောက်ရေများအလွန်လျော့နည်းရာခိုင်နှုန်းခန့်မှန်းအားဖြင့်, ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးသို့မဟုတ်ရေမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကယ်တင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းအဘို့အမသင်မနေရဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြီးစားရေအလောင်းတွေစက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအားဖြင့်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညူးတဲ့နေကြသည်။ သင့်လျော်သောရေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုရေချွေတာရေးအတွက်ပိုပြီးထိရောက်မှုရောက်စေဖို့စသည်တို့အားလုံးစက်မှုဇုန်အဆောက်အအုံများ, တိုက်ခန်းများ, ကျောင်း, ဆေးရုံ, အတွင်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ရာထူးတိုးရပါမည်။ အသိအမြင်အစီအစဉ်များဘုံလူများသောက်သုံးသို့မဟုတ်ပုံမှန်ရေရှားပါးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလားအလာပြဿနာများအကြောင်းကိုသိစေရန်ကို run ရပါမည်။ ရေ, လေလွ ပတ်သက်. လူရဲ့သဘောထားကိုပပျောက်ရေးဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။
မိုးရေရိတ်သိမ်းကျေးရွာအဆင့်မှာကလူအားဖြင့်အစပျိုးရပါမည်။ မိုးရေသငျ့လျြောသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေနဲ့သေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ရေကန်အောင်ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ Young ကကျောင်းသားများကိုပိုပြီးသတိထားပါနှင့်ပြဿနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရေမလုံခြုံမှုနှင့်ရှားပါးမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအများအပြားရှိလူများရဲ့လူနေမှုထိခိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရင်းများအရရေလူရဲ့ဝယ်လိုအားလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များတွင်ခြောက်လခြံဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ရေးတစတစဝယ်လိုအားများသည့်နေရာများတွင်နေထိုင်သည်။ အရာအားလုံးစသည်တို့ကိုလူဦးရေ, စိုက်ပျိုးရေး, စက်မှုလုပ်ငန်းများကဲ့သို့ချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှင့်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဤအခြေအနေပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်
ရေ Save လုပ်နည်း
ဖြန်းတစ်လလျှင်ရေပိုဂါလန်ကိုကယ်တင်နိုင်သည့်ပိုက်တွေနဲ့ပိုပြီးရေချပြီးထက်အပင်ပေါ် သာ. ကောင်း၏။
Leaky faucets နှင့်ပိုက်အဆစ်တစ်နေ့လျှင်ရေတစ်ဝှမ်း 20 ဂါလန်ကယ်တင်ရသောရေယိုစိမ့်ကယ်ဖို့စနစ်တကျ fixed ရပါမည်။
ရေပုံးနဲ့ခွက်၏အသုံးပြုမှုအစားရေ 150 ဂါလံတစ်ဦးချင်းစီအချိန်အထိကယ်တင်ရသောပိုက်ကို အသုံးပြု. ၏ကားကိုဆေးကြောဖို့ကောင်းလှ၏။
မိုဃ်းရေမှစီးဆင်း restrictors ၏အသုံးပြုမှုကိုလည်းပိုပြီးရေကယ်တင်တော်မူ၏။
အပြည့်အဝတင်အဝတ်လျှော်စက်တွေနဲ့ပန်းကန်ဆေးစက်အသုံးပြုခြင်းတဝိုက် 300 တစ်လလျှင် 800 ဂါလန်မှကယ်တင်တော်မူ၏။
#good-karma #important #water #life